Ini ndinogona kusimudzira Mac yangu kune macOS Sierra kubva kune yekare OS X? | Ndinobva mac
Iyi ndeimwe yemibvunzo iyoyo yatinowanzowana pamazuva akadai seiyi kana iyo Mac inoshanda sisitimu yekuvandudza iripo kana padhuze nekuwanikwa. Chokwadi ndechekuti inodzokororwa pese patinowana kuburitswa kutsva kweOS X kana mune ino macOS uye nekudaro tinoda kujekesa uyu mubvunzo zvishoma. Ini ndinogona kukwidziridza Mac yangu kune macOS Sierra kubva kune yekare OS X? Hongu unokwanisa Asi isu tinofanirwa kufunga zvakateedzana zvezvinhu uye ndezvekuti haazi ese maMacs anoenderana neiyi nyowani macOS Sierra uye kwete ese masisitimu anoshanda anokwanisa kukwakuka akananga kune iyo nyowani, saka tinoenda muzvikamu.
Kana iwe uri mumwe weavo vane Mac pane OS X Leopard, unofanirwa kusimudzira kune OS X Snow Leopard usati waisa iyo nyowani macOS Sierra inoshanda sisitimu. Iyi ndiyo yakashata vhezheni inowanikwa yekuvandudza Mac kana ichienderana uye isu hatizvitaure nekuda kweiyo inoshanda system pachayo, tinozvitaura nekuti unofanirwa kutenga OS X Snow Leopard in the Apple Online Store kukwanisa kuita kusvetuka uku muchirongwa. Sezvo iwe wakanyatsoziva mushure mekuverenga iyi ndima, yapfuura OS X kuLeopard haienderane neichi chivandudzo uye izvo zvavanoratidza sechinodikanwa chekugadzirisa ndechekuti iwe unogona kugadzirisa zvakananga kune macOS Sierra kubva kuOS X Lion 10.7.5 kana gare gare.
Kana uine Snow Leopard 10.6.8 uye Mac yako inoenderana neiyi nyowani vhezheni ye macOS Sierra 10.12, iwe unofanirwa kutanga wagadzirisa kune OS X El Capitan kuitira kuti uite iyo yekuvandudza system. Chokwadi ndechekuti mune ino nhanho iri nyore uye isu tinongoda kuwana iyo webhusaiti yeapuro kwatinozowana dhawunorodha link yeOS X El Capitan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Ini ndinogona kukwidziridza Mac yangu kune macOS Sierra kubva kune yekare OS X?
Unogona here kusvetukira kuMacOS Sierra kubva kuYosemite? Shuwiro yakanakisa.
Manheru akanaka shiryu222,
Ini pachangu handikwanise kuzvisimbisa kwauri nekuti yaive muEl Capitan, asi haufanire kunge uine dambudziko nazvo.
Ndakafungidzira kuti handifanire kuita dambudziko, asi ndichakamirira kuti ndione zvinotaurwa nevanhu, uye zvakanaka, pane chirongwa chandinoshandisa chaunofanira kubvisa SIP kuti chishande uye ndizvo zvinondishungurudza zvishoma, ndichifanira kuita izvo ... Maita basa.
unogona kuenda kubva mavericks kuenda mac os x sierra?
Luis mendoza akadaro
Ndine OS X 10.6.8, sekunzwisisa kwangu ndinofanira kutanga ndaenda kuOS X El Capitan, zvisinei handisi kuwana chinongedzo chekutora El Capitan pawebhusaiti yeApple.
Pindura kuna Luis Mendoza
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, hazviite kuti ndiwane chinongedzo kunyangwe kubhadhara.
Mhoroi, ini ndakaisa yosemit kuna osx sierra uye mac yangu haipinde, inogara mumushandisi kupinda uye ipapo inomirira, mumwe munhu ane chimwe chinhu chakafanana chakaitika kwairi.
Ehe, ndakakwidziridza kubva kuYosemite kuenda kuSierra ndikagara mudanda
Ini handinzwisise kuti, nemutemo wakawandisa wekusimudzira uye kushambidza mifananidzo se "kambani inochengetedza" iyo inowanikwa pasirese, chirongwa che software hachina KUSIMBISWA pamakambani ASIMBIRA kutenga makomputa matsva (mafoni) kuti vakwanise gadziridza masisitimu anoshanda kana gadzira mashandisiro matsva ari pamusika.
Chii chakanakira kusimba kwekombuta kana, mukufamba kwenguva, mashandiro / mashandiro matsva achindimanikidza kutenga imwe?
Jose alarcon akadaro
Wagona kutaura…. ndizvo chaizvo uye chaizvo…. zvinosuwisa kuti hapana munhu anoti chero chinhu ... uye zvicharamba zvakadaro .... hurongwa hwenyika nyowani hunouisa ... zvido zveavo vari mariri zvinogona…. uye hapana chavachaitira vanhu …….
Pindura kuna Jose alarcon
Ndokumbirawo mubatsire. Ini zvakare ndine 10.6.8 uye handisi kuwana nzira yekuenda kuEl Capitan. Chero ani anoziva kwaunogona kurodhaunira? kana pamwe imwe yepakati macos? Zvakanaka, ini handikwanise kuenda kuSierra chaiko. Kutenda mberi.
mumwe munhu angawana chinhu? Ini ndiri mumamiriro akafanana, muna 10.8.5 uye handigone kumutsidzira kuCapitan.
Ini ndinofunga nzira iri nyore ndeyekutenga iyo iosx shumba 10.7 uye kubva ipapo zvichienda iwe pamwe neyakajairika
jose solozano akadaro
Pano ini ndawana mamwe ekurodha pasi asi ini handisati ndaziva kuti ndoiisa sei nekuti pandinoitsvaga inondiudza kuti zvakakosha kuiendesa kuDVD, uye handina 5.4 gb dvd, zvinova izvo kaputeni anorema, mubvunzo wakakomba unogona kuiswa kaputeni kubva kuUSb uye kuti ungazviita sei? chero peji kwavanoritsanangura?
Pindura kuna jose solozano
Ini ndinonzwisisa kukakavara kwako uko kugadzirisa kunozopedzisira kwatikonzera matambudziko ehurdware Chinhu chekongiri ndechekuti tekinoroji iri mukusimudzira kunatsiridza uye kazhinji kuita nyore zvinhu. Aya matekinoroji anovandudza anowedzera simba makomputa nemahurongwa ekushanda anoda kuwirirana Hardware.
Ini ndinonzwa senge kukwidziridza edu ekare zvishandiso nemaitiro matsva ekushandisa kwakafanana nekuisa chinotevera-chizvarwa injini mumotokari yekare. Zvingangodaro zvichizopedzisira zvichitipa matambudziko.
Yangu MacBook Air iri kubva 2011, ine iyo yekutanga sisitimu yekushandisa uye ini handina kumbobvira ndaita dambudziko, kunyangwe bhatiri richiri kuita nemazvo.
Mhedziso: kana mudziyo wako uchishanda nemazvo, nei uchiubata? Uye kana iwe wakaneta nazvo kare, chengetera imwe nyowani.
Dambudziko rinomuka kana iwe ukaisa chirongwa uye icho chinokuudza iwe "Ichi chishandiso chinoda OS X 10.10 kana gare gare." Zvakaitika kwandiri ne Sketchup (dhizaini) uye ini ndine OS X 10.9.5 uye handigone kugadzirisa nekuti komputa yangu haina zvido zvekutanga. Yakashata yeMac.
Mhoroi, ndingaite sei kuti ndiwedzere mac yangu pro pro kuIOS 10.11, ini ndine vhezheni 10.10.5 uye handizive kuti ndozviita sei nekuti iwo mac akafanana haana kundivigira matsva matsva kwekanguva.Chinetso chii?
JOSE VTE. CARTER akadaro
MAZUVA AKANAKA NDINE 10.9.5. NDINOKUMBIRA KUTI NDIMBUDZE SOFTWARE IYE VERSION 11. YEMAZVIMBO EZVIMWE HANDINA DZIDZISO IZVI. NDINOFANIRA KUPEDZISIRA, CHIMWE CHINOKOSHA CHICHAITIKA KUNA MAC.
NDATENDA PAKUFANIRA, KUKWazisa
Pindura kuna JOSE VTE. CARTER
Ndine vhezheni 10.5.7 uye El Capitan haioneke muchitoro cheapp. Zvandinoita?
Mangwanani akanaka, wakakwanisa kuzvigadzirisa? Zvinoitika kwandiri zvakangofanana.
Ndine vhezheni 10.10.5 uye ini handizive kuenda 10.11
Mhoroi, masikati machena nekuti hazviite kuti ndiise zvinyorwa zvitsva mushure mekuisa 10.5.4, pandinoda kuisa pane diski zvinondiudza kuti diski haina mamiriro ekuvandudza, uye ndaive neiyo 10.7 vhezheni. x
William H akadaro
Mangwanani akanaka ndakagadziridza imac midle 2010 kusvika ios sierra 10.12 asi ini handibatanidze keyboard kana mbeva.
Ini ndinoedza kudzima bluetooth uye hapana chinoitika. Ndinoedza kubatanidza zvishandiso uye kwete.
Ndingagadzirisa sei izvi, ndinofanira kuita yakachena kumisikidza iyo ios x sierra kana capitan?
Ndinokutendai nekubatana kwenyu
Pindura kuna William H
Pakupedzisira chii? Kana ndine Leopard ndinofanira kuisa chando ingwe uye ipapo ini ndinogona kutotanga kuisa iyo sierra kubva ku bootable usb? kana ini ndinofanira kuisa chando ingwe, uye ipapo Shumba kune iyo kana gare gare kuisa kubva kuUSb sierra?
Hi, ndine imac kubva muna 2007, uye iye zvino ndine Captain 10.11.6. Zvinoita here kuti umutsiridze kune imwe yazvino? Kunyangwe kana iri neimwe musungo? Pane hurongwa here?
Pindura kuna Yohakim
Mhoroi vanhu vese, ini ndine mac ine macOS Mavericks, ndingaite sei kuti ndigadzirise kune imwe nyowani vhezheni? Ndakaedza kuimisikidza kuCapitan, Sierra, Mojave, asi haina kunditendera
macOS Sierra 10.12 yave kuwanikwa kune vese vashandisi